အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၌ အကြမ်းဖက်သမားများက တိုက်ခိုက်လာနိုင်ဟု သြစတြေးလျက သတိပေး - Yangon Media Group
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၌ အကြမ်းဖက်သမားများက တိုက်ခိုက်လာနိုင်ဟု သြစတြေးလျက သတိပေး
ဆစ်ဒနီ၊ မတ် ၁၇ – သြစတြေးလျအစိုးရသည် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်လာနိုင်မှု အစီအစဉ်အား ဖော်ထုတ်သိရှိထား၍ စုစည်းညီညွတ် စွာဖြင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များသို့ လျှို့ဝှက်စာပေးပို့ထားပြီး တပ်လှန့်နှိုးဆော်ထားသည်ဟု မတ် ၁၇ ရက်သတင်းများအရ သိ ရှိရသည်။
သြစတြေးလျပြည်ထဲရေးဝန် ကြီး ပီတာဒပ်တန်က ဆစ်ဒနီတွင် ကျင်းပသည့် အာဆီယံ-သြစတြေး လျထိပ်သီးအထူး အစည်းအဝေးသို့ လူမှုမီဒီယာသုံး၍ အဖျက်အမှောင့် များ လုပ်နိုင်ကြောင်း သတိပေး ချက်များလည်း ပေးပို့ထားခဲ့သည်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၌လည်း အကြမ်းဖက်သမားများက တိုက် ခိုက်နိုင်ကြောင်း သတိပေးပြော ဆိုခဲ့သည်။
”အကြမ်းဖက်သမားတွေ လူ မျိုးရေးခွဲခြားသူများ ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်လာမှုများလည်း ပြုလုပ် မယ်လို့ သတင်းရရှိထားပါတယ်” ဟု ဆက်လက်ပြောကြားလိုက်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေဲ့ ကတော့ တန်ပြန်အကြမ်းဖက်အစီ အစဉ်များရေးဆွဲထားပြီး ခုခံကာ ကွယ်သွားမှာပါ။ ကင်ဘာရာအနေ နဲ့ အာဆီယံအသင်းကြီး လုံခြုံရေး ကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးသွား မှာပါ”ဟူ၍လည်း ထုတ်ဖော်ပြော ကြားလိုက်သည်။
”ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဆီးရီးယားမှာ ဘာသာရေးအစွန်း ရောက်များရဲ့ ခါလီဖိတ်နိုင်ငံတော် ထူထောင်ဖို့ အကြံအစည်ပျက်သွား တော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ထင်ရှား တဲ့အခမ်းအနားတွေ ပွဲလမ်းသဘင် တွေမှာ ဖောက်ခွဲဖို့ ကြံစည်နေကြ ပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ကိုလည်း တိုက်ခိုက်ဖို့ ကြံစည်နေ တယ်”ဟူ၍ ¤င်းကပြောဆိုလိုက် သည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် မ ကြာမီက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် ခံရမှု ခြောက်ကြိမ်ခါးသီးစွာခံစား ခဲ့ရသည်။ လေယာဉ်အပိုင်စီးတိုက် ခိုက်ရန် အကြံအစည်အပါအဝင် အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ် ၁၄ ခုကို ဖော် ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆစ်ဒနီတွင် ကျင်း ပသည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်း အဝေး အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင် စေရန်အတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လုံခြုံရေး၊ လူဝင်၊ လူထွက်ကြီးကြပ် ရေး၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု တန်ပြန်အစီအစဉ်များ၊ ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး၊ နယ်စပ်ဒေသများ လုံခြုံ ရေးများ စီစဉ်ထားသည်ဟူ၍ ပြည် ထဲရေးဝန်ကြီးရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရှိရသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် အာ ဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဖြစ်သေးသော် လည်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြ သော ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများနှင့် အာ ဆီယံရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ် လေ့ရှိသည်။
နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အမျိုးသမီး၊လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ကဏ္ဍမြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ဟု ရန်ကုန်??
ထိုင်ဝမ်-အမေရိကန် အပြန်အလှန်ခရီးသွားလာရေး အမေရိကန်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသဖြင့် တရုတ်အစိုးရဒေါသထွက်
မြန်မာဘက်မှ သောင်ရင်းမြစ်အတွင်းအမှိုက်များစွန့်ပစ်နေသဖြင့် ထိုင်းဘက်မှစာဖြင့်အကြောင်းကြ?
ဥရောပပွဲ ကစားခွင့် ပိတ်ပင်ခံရခြင်း အတွက် အေစီမီလန်အသင်း အယူခံဝင်မည်